GO’AAN culus oo laga soo saaray askarta rasaasta ku dhex furta SHACABKA - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon GO’AAN culus oo laga soo saaray askarta rasaasta ku dhex furta SHACABKA
GO’AAN culus oo laga soo saaray askarta rasaasta ku dhex furta SHACABKA
Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada qalabka-sida ee dowlad gobaleedka Galmudug, Gaashaanlle Dhexe Cabdulaahi Abuukar Xassan ayaa shaaciyey in tallaabo adag laga qaadi doono Askariga bulshada dhexdeeda ku fura rasaasta.
Guddoomiyaha oo khudbad u jeedinayay Saraakiisha iyo Askarta ciidanka xooga dalka ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sidoo kale sheegay in aan la ogolaan doonin Askari xooga dalka ka tirsan uu fasax la’aan iska aado gudaha magaalooyinka.
Waxa kale oo uu sheegay inay dambi tahay in Ciidamada Milatarigu soo galaan shacabka dhexdooda, ayada oo uu sidoo kale faray hay’addaha amniga sida Booliska iyo Nabad-sugida.
Guddoomiye Cabdulaahi Abuukar ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ku amaanay guulahii ay kasoo hooyeen howl-galada ka socda gobolka Mudug ee xoreynta magaalooyinka cusub sida Camaara ee maamulka Galmudug.
Waxa uu ku tilmaamay howl-galada ay ciidamada deegaanadaas kaga sifeynayaan argagixisada mid tusaale u ah soo afjarida Al-Shabaab iyo in aysan haynin Awood ay kusii joogi karaan deegaanada maamulkaas.
Go’aanka uu shaaciyey Guddoomiyaha ayaa waxa uu kusoo aadaya xili ay shacabka cabasho badan ka gudbiyeen rasaasta ay ciidamada ka dhex ridaan xaafadaha iyo gudaha magaalooyinka, islamarkaana ay ku dhib qabaan iska hor-imaadyada macnaha laheyn ee dhex-mara ciidamada.